Contributor, Columnist » Increasing your vocabulary – ဆရာမျိုးကျော်မြင့်	3
Posted by kai on Nov 21, 2015 in Contributor, Columnist, Education |3comments
ယခုလတွင် မကြာသေးမီကကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ သမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Idioms လေးတွေကိုဖော်ပြ လိုပါတယ်။ ဒါမှလည်း ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးအကြောင်းကို မြန်မာလိုသာမက English လိုပါအားရပါးရပြောနိုင်ကြအောင်ပေါ့။
နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးသွား ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးနီးလာလေလေ election fever က ပြင်းထန်လာလေလေပေါ့နော်။ election fever ဆိုတာကို ရွေးကောက်ပွဲပိုး လို့ဘာသာပြန်ရင်ရမယ်ထင် ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါ အားလုံးလိုလိုက ဒီအကြောင်းပဲပြောနေကြလို့
Election fever has seized the whole of Burma “မြန်မာပြည်တပြည်လုံး ရွေးကောက်ပွဲပိုးဝင်သွားပြီလို့ “ပြောရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ရယ်စရာကောင်းတာက လက်ရှိအခြေအနေ (I hope you remember the word – “status quo”) ကို မပြောင်းလဲစေလိုတဲ့၊တနည်းအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ NLD အဖွဲ့ကိုမလိုလားတဲ့ လူနည်းစုက “လေပူလိုင်း”တွေတော်တော်လေးထုတ်လွှင့်ကြတယ်။
Many politicians favoring the status quo have been guilty of issuing “hot air”-alot of empty and meaningless threats and promises.
ခဲ့သယောင်၊ ထင်ယောင်ထင်မှားစကားမျိုးစုံကို ဘယ်သူသေသေ ငတေမာ ပြီးရော စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ ပြောဆိုကြတာတွေ အားလုံးသိကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်လူထုက ဒီ hot air တွေတနည်းအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့တဲ့ လိမ်ညာလှည့်ဖျားထားတဲ့ စကားတွေကို နားမယောင်ခဲ့ပါဘူး။အသက်ပေါင်းများစွာစတေးခဲ့ရပြီး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျဉ်းခံထားရပြီးမှရလာတဲ့ ဒီအသဲကြားကမဲတပြားကို ပြည်သူလူထုဘက်က အမှန်တကယ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ NLD အဖွဲ့ကြီးကိုသာ ပြတ်ပြတ်သားသားမဲပေးခဲ့တာ အမှန်တကယ်ကိုအားရကျေနပ်ဖွယ်ရာပါဘဲ။
ဒီနေရာမှာ political hot potato ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားအများစု မပြောလိုတဲ့ တနည်းအားဖြင့် ကြားတောင်မကြားလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့။
ဥပမာ-လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့က အမတ် လောင်းအချို့ကို ၎င်းတို့၏ဝင်ငွေနဲ ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကို သတင်းထောက်များက မေးကြတဲ့အခါ မဖြေနိုင်ဘဲ ဟိုလှည့်ဒီလှည့့် နဲ့စကားပြောင်းပစ်ကြတာ အားလုံးအသိပါဘဲ။ဒီအမတ်လောင်းတွေရဲ့ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို political hot potato လို့သုံးစွဲလို့ရပါတယ်။ ဒါပေါ့လေ သမာအာဇီဝနဲ့ ရထားတာ မဟုတ်တော့ဘယ်လိုမှ မှတ်ကျောက်တပ်မခံရဲဘူးပေါ့။ NLD အဖွဲ့ကြီးကတော့ သူတို့အမတ်တွေ လွှတ်တော်မတက်ခင်မှာ အားလုံးရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ကို တိတိကျကျဖော်ပြပါမယ်လို့ ကတိပေးထားပါတယ်။ဒီလိုဘဲဖြစ်ရမယ်လေ။
In the recent elections in Burma, questions about the income and personal properties of some of the candidates for the ruling party have becomeapolitical hot potato.
နောက်ထပ်တင်ပြလိုတဲ့ Idiom လေးတစ်ခုကတော့ vote with your feet ပါဘဲ။ စာရေးသူရော၊ စာဖတ်သူအများစုပါဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးတို့မစောင့်နိုင်ခဲ့လို့
We have already voted with our feet by leaving Burma to move to the US.
ဒီတဖက်စွန်းကျတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကြီးကို ဆန့်ကျင်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးပါပြီ။ကိုယ်အင်မတန်ချစ်ခင်တွယ်တာတဲ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားခဲ့ခြင်းဖြင့် Democracy ကိုမြတ်နိုးကြောင်း Human Rights ကိုတန်ဘိုးထားကြောင်းပြသခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယခု NLD ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကြီးတက်လာခွင့်ရရင် မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်သွားရောက်ကူညီခြင်းအားဖြင့် နောက်ထပ်တခါ voting with our feet လုပ်ကြအုံး မှာပါ။
ယခုပြီးစီးသွားတဲ့ မြန်မာပြည်က ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ပါတီများစွာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြမှန်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို အင်္ဂလိပ်လိုatwo-horse race လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုမျက်စေ့လည်အောင်ပါတီတွေဘယ်လောက်များများဖွဲ့ထားပါ
စေ တကယ်တော့ရွေးစရာက နှစ်ခုထဲပါ။ လူအနည်းစုကြီးပွားရေးအတွက် တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတတွေ အကုန်ထုတ်ရောင်းပြီး တိုင်းပြည်ကိုအကြွေးနွံနဲ့ နစ်သထက်နစ်အောင် ဖန်တီးနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးကို ထောက်ခံမလား၊ လူထုဘက်က အစဉ်တစိုက်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး လူထုအကျိုးကိုသယ်ပိုးပေးတဲ့ NLDအဖွဲ့ကြီးကိုထောက်ခံမလား။ ဒီနှစ်ခုအနက် တစ်ခုခုကိုသာေ ရွေးချယ်ရ မှာမို့ Two-horse race လို့ဆိုလိုတာပါ။
ကြုံကြိုက်လို့ဖောက်သည်ချပါရစေ။ တလောက အသိတစ်ယောက်ရဲ့သမီး မင်္ဂလာဆောင်မှာ U.S One million အကုန်ခံခဲ့ ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကဆင်းရဲတွင်းထဲမှာ အကြွေးပတ်လည်ဝိုင်းနေချိန်မှာ ဒီမိသားစုဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီလောက်ချမ်းသာနေလည်း မေးစရာမလိုပါ။ဒီလို carpetbaggers တွေကို တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုကကောင်းကောင်းဒဏ်ခတ်ဖို့ အချိန်ကျရောက်လာပါပြီ။
Carpetbaggers ဆိုတာစာရိတ္တခြစားနေတဲ့၊ ခံယူချက်လုံးဝမရှိဘဲ ကိုယ့်အကျိုး
တစ်ခုထဲသာကြည့်တက်တဲ့ အခွင့်အရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားမျိုးကိုဆိုလိုပါ တယ်။ မြန်မာပြည်ြကီး ကြီးပွားလာဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကမ္ဘာမှာကျော်ကြားလာဖို့ဒီလို carpetbaggers တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးဥပဒေအရ အရေး
ယူနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော် တို့ မြန်မာလူမျိုးအများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပီပီ အထူးခွင့်လွှတ်တတ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ မိမိကိုစော်ကားထားတာကိုခွင့်လွှတ်ကြပါ။ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို စော်ကားထားတာတွေ၊ မတရားခိုးယူထားတာတွေ၊ ဖျက်ဆီးထားတာတွေ၊ တိုင်းတပါးကို ရောင်းစားတာတွေကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ဖို့မသင့်ပါ။
ဒီနေရာမှာ Fourth estate လို့ ခေါ်တဲ့media ရဲ့အခန်းကဏ္ဍက အရေးကြီးပါတယ်။ မဟုတ်တာလုပ်နေတာတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဖော်ထုတ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ယခုအချိန်ဟာ Political Football ကစားရမဲ့အချိန် မဟုတ်တော့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကြီးမှာ နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစသဖြင့် အဖက်ဖက်မှာလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပါသေးတယ်။သူလုပ်သင့်တယ်၊ ငါလုပ်သင့်တယ်ဆိုပြီး political football ကစားနေကြမဲ့အစား အားလုံးဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြမဲ့အချိန်ပါဘဲ။
အခွင့်အရေးသမား carpetbaggers တွေကို”မင်းတို့အရှုံးပေးကြပါတော့။” Please throw in the towel
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ့ဂဇက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅တွင်ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: မနေ့က The fifth Estate (2013) ဆိုတဲ့ ကားကို ကြည့်မိတော့ web page တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Language/vocabကွန်ပြူတာဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ဖောဖောသီသီပါတာ
ဘာမှ နားမလည်တာနဲ့ မင်းသားပဲ လိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ အေးရော။
kai says: ယောက်ျားတွေကျ.. ရုပ်ရှင်စိတ်မ၀င်စားရင် မင်းသမီးပဲကြည့်နေလိုက်တတ်တာမို့..
လူ.. လူ.. တူပုံ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: စကားလုံးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်… မှတ်တော့ မှတ်ထားလိုက်တာပဲ.. ဦးနှောက်က ကြာကြာမခံရင်တော့ မသိဘူး.. :P